Ngwa nchekwa - Ndị na - echekwa ngwa ọrụ China na ụlọ ọrụ ya
ZR-1070 Microbial nnwale usoro nnwale
Sistemụ ZR-1070 nwere usoro nke usoro gas, usoro nchọpụta isi, usoro nchedo na usoro njikwa.Ọ nwere usoro ihe mejupụtara, nke a na-eji maka ule nyocha nke microbial nke mpempe akwụkwọ nke mpempe akwụkwọ, akwa ọrụ na uwe dị ọcha .
ZR-1311 Nnu Aerosol Generator
ZR-1311 nnu aerosol generator bu ngwa oru puru iche nke nakweere onu mmiri Collison ka atughari ya na ikpochapu ihe nke uzo NaCl iji meputa ihe ndi aerosol na nha. Iji n'ọtụtụ ebe imeghari ka mba idụhe, ọ nwere mpụga ikuku iyi imewe, ihicha ngwaọrụ na multi-nozulu inye iwu valvụ. Mgbe ikuku ikuku dị n'etiti 100L / min-120L / min, ntinye ikuku aerosol nwere ike iru (10 -50) μg / m3.
ZR-1304 mmanụ aerosol generator bụ ngwa ọrụ pụrụ iche nke nwere ike ịmepụta mmanụ mmanụ na usoro ọgbọ oyi. Ọnọdụ nke ikuku aerosol dị elu bụ 0 ~ 200 mg / m³ mgbe ikuku ikuku dị 0 ~ 120 L / min, ma ị nwere ike ịhazigharị ikuku aerosol n'ọtụtụ dịgasị iche site na iji aka gị gbanwee usoro dilution ahụ. Aerosols na-arụ ọrụ kwekọrọ n'ụkpụrụ mba metụtara ya ma metụta ụlọ ọrụ nyocha nke ahụike, ebe a na-ahụ maka ịgwọ ọrịa na ichekwa ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ ndị na-ere ọgwụ, nchọpụta nyocha nke HEPA nzacha n'ime ụlọ dị ọcha.
ZR-1220 Mask dabara nke ọma
Ihe nyocha ZR-1220 dabara nke ọma bụ ngwa pụrụ iche maka nnwale nke masks na ndị na-eku ume, nke kwekọrọ na OSHA na GB 19083-2010 chọrọ teknụzụ maka ihe mkpuchi ahụike. A na-emetụta ya n'ọtụtụ nyocha dị mkpa yana nyocha nke ngwaahịa iku ume site n'aka ndị nrụpụta iku ume na ụlọ ọrụ nyocha ngwa ọrụ mba.
A na-eji ZR-1211 ihe nyocha na-eguzogide iji nwaa inhalation na iku ume ume nke nkpuchi na ọnọdụ nyocha. Dakọtara na ọtụtụ eruba udu, adabara ịrụ yiri nnyocha na ule nke nkpuchi maka nkpuchi Nsukka, mba nnyocha institutes nke oru nchedo ngwaọrụ
ZR-1201 Mask na-eguzogide ihe nyocha
ZR-1006 nkpuchi particulate filtration arụmọrụ na ikuku eruba eguzogide tester bụ ọdabara nwalee na urughuru filtration arụmọrụ na airflow eguzogide nke masks na nyo ihe maka emmepe nke ngwaọrụ ọgwụ nnyocha, nche nnyocha center, ọgwụ nnyocha center, emmepe nke ọrịa na-achịkwa na mgbochi, center nke akwa akwa, ụlọ ọgwụ na nkpuchi R&D emepụta.
ZR-1002 nkpuchi ihe nlere nke nkpuchi
Ihe nyocha ihe nkpuchi ihe nkpuchi ZR-1002 bu nwale ihe nlere nke nkpuchi site na itinye isi nke mba site na ulo oru nhicha onwe onye 500L, wee kpuchie nkpuchi isi site na, ma bubata uzo di omimi ( 0,6 ± 0,050) μm, ịta bụ 20mg / m³ nke NaCl aerosol ma ọ bụ uka n'etiti dayameta (0.3 ± 0.050) ,m, ịta bụ 20mg / m³ nke mmanu mmanu aerosol n'ime onwe-ihicha ule ụlọ, na isi ụdị simulate ume na sinusoidal usoro , na-eji photometers gbagoo na ala iji chọpụta ịta ahụhụ nke nnu aerosol na mmanụ aerosol tupu na mgbe nkpuchi ahụ iji nyochaa mmetụta nchebe nke ihe nkpuchi ahụ.
Nkpuchi Bacterial Filtration arụmọrụ (BFE) ule
Ihe nkpuchi nje nzacha (VFE)
Nkọwa ndị bụ isi nke ZR-1000A mask virus filtration arụmọrụ (VFE) na-agbaso YY / T1497-2016 <Usoro nyocha nke nyocha maka arụmọrụ filtration virus (VFE) nke ihe nchekwa ihe mkpuchi ihu ọgwụ-Usoro nyocha site na iji Phi-X174 bacteriophage >, Usoro nke ụzọ gas abụọ na-emekọ ihe atụ na-eme ka ọ dị mma.